Afhayeenka Xarakada Al-Shabaab oo eedeymo kulul u jeediyey Heyadaha u dooda xuquuqda aadanaha | Salaan Media
Home Wararka Afhayeenka Xarakada Al-Shabaab oo eedeymo kulul u jeediyey Heyadaha u dooda xuquuqda...
Afhayeenka Xarakada Al-Shabaab oo eedeymo kulul u jeediyey Heyadaha u dooda xuquuqda aadanaha
Khamiis,18.4.13 (SM)Afhayeenka Xarakada Al-shabaab Shiikh Cali Max’uud Raage (Shiikh Cali Dheere) ayaa ku eedeeyey heyadaha caalamiga ah ee dooda xuquuqda aadanaha iney u shaqeeyaan danaha dalalka reer galbeedka.
Shiikh Cali Dheere ayaa intaa ku daray in heyadahaas ay had iyo jeer qariyaan dhibaatooyinka dalalka caalamka loogu geysto dad muslimiinta ah ayna buun buuniyaan dhibaatada ay geystaan muslimiinta is difaacaya ee dulmiga lagu hayo.
“kuwa isku sheegaya hay’adaha xuquuqul insaanka, waa kuwo u adeega danaha gaalada, waxaana taas caddeyn u ah marka ay ka hadlayaan dadkii ku dhintay weerarkii Maxkamadaha, maxay uga hadli waayeen markii guryaha Muqdisho madaafiicda lagu garaacayay, taangiyada dadka la dar-darsiinayay, ilmaha saqiirrada ah la gawracayay, maydadka dadka muslimiinta ah waddooyinka ay daadsanaayeen, “ ayuu yiri Shiikh Cali dheere.
Afhayeenka Xarakada Al-Shabaabayaa sheegay ineysan iyagu dan iyo muraad ka laheyn qeylo dhaanta iyo cambaareynta kaga imaneysa hay’adaha xuquuqda aadanaha, ayna sii wadi doonaan weerarada ay ku hayaan xarumaha dowlada iyo kuwa AMISOM.
“Qaylada kasoo yeertay hay’adaha xuquuqda aadanaha isku sheegaya waxay ku salaysan tahay wixii ay gaalada ay iyaga u shaqeeyaan ay qarashka ku bixinayeen oo ay arkayaan inay sii bur-burayaan” ayuu intaa ku daray Shiikh Cali Dheere oo mar kale difaacay weerarkii ay ku qaadeen xarunta maxkamadaha gobolka Banaadir Axadii ina dhaaftay.